TCE- Maro ny lamasinina efa tra-doza…: voasambotra ireo mpangalatra lalamby | NewsMada
TCE- Maro ny lamasinina efa tra-doza…: voasambotra ireo mpangalatra lalamby
Noraisim-potsiny tao amin’ny gara Razanaka sy Fanasana anelanelan’i Brickaville sy Andekaleka ireo sivy lahy malaza ratsy amin’ny fangalarana lalamby nandritra ny hetsiky ny polisy, ny 26 mey lasa teo. Maro ny lamasinina efa tra-doza vokatr’izany…
Manoloana ny fisian’ny andian-jiolahy mangalatra ny vy amin’ny lala-masinina any amin’ny faritra Atsinanana mihazo an’i Toamasina (TCE), sivy lahy no tra-tehaky ny polisy tao anelanelan’ny Brickaville sy Andekaleka, ny 26 mey lasa teo. Naharay fitarainana ny eo anivon’ny polisy avy ao Moramanga fa misy mangalatra ny karazam-by atao hoe « clip » amin’ny lala-masinina any an-toerana. Nijery ifotony avy hatrany niaraka tamin’ny mpitandro filaminana avy aty Antananarivo izy ireo ka nanao hetsika nandritra ny tapa-bolana entina hisamborana ireo tsy matahotody. Vokany, sivy lahy no voasambotra tao amin’ny gara Fanasana sy Razanaka. Sarona teny amin’izy ireo ny vy miisa 237 avy nangalariny. Tsy vitan’izay, nahatrarana rongony 50 kg koa ireo jiolahy. Samy notanana am-ponja ao Ambalatavoahangy Toamasina avokoa ireo sivy lahy taorian’ny fanadihadiana azy ary mitohy ny fikarohana ireo namany hafa. Marihina fa ao anatin’ny fanarenana tanteraka ny lalamby amin’izao fotoana ny orinasa misahana izany, saingy misy hatrany ireo minia manimba ny fotodrafitrasa.
Miteraka lozam-pifamoivoizana goavana…
Anisan’ny mampitaraina ny mpampiasa ny lalamby ny fahaverezan’ireo vy maro, izay miteraka loza ho azy ireo. «Efa maro ny lamasinina nivadika noho ny fanjavonan’ireo « clip » mamikitra aminy », hoy ny mpanamory lamasinina iray. Tsy ny any amin’ny faritra irery ihany, iharan’io fangalarana io avokoa ny lalamby eto an-dRenivohitra. Mitohy, noho izany, ny hetsika ataon’ny mpitandro filaminana entina hamongorana ireo tambajotran-jiolahy manimba ny lalana ireo.